किन माटो परीक्षण महत्वपूर्ण छ?
2021-01-02 By GharSansar0Comments
तपाईको माटोको अवस्थाले घर निर्माण प्रक्रियामा आश्चर्यजनक रूपमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ.
मैले जग्गा किन्दा पहिले माटोको परीक्षण गर्ने छनौट गरेमा मैले के अपेक्षा गर्नुपर्छ?
यदि तपाइँ जग्गा किन्नु अघि तपाइँको नयाँ सम्भावित सम्पत्तीको माटो परीक्षण गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाइँले त्यसलाई नयाँ घर साइटको लागि बिड लगाउनुहुँदा तपाइँलाई थाहा हुनु आवश्यक छ। यस उदाहरणमा, तपाइँले जग्गामा एक प्रस्ताव राख्नुहुनेछ र यसलाई खरीद सम्झौतामा राख्नुहुनेछ कि तपाइँले माटोलाई इजाजतपत्र प्राप्त माटो ईन्जिनियरले जाँच गर्नुहुनेछ। यसको मतलव तपाईले कुनै परिणामहरु वा कुनै परिणामहरु बिना परीक्षण परिणामको आधारमा सम्पत्ति खरीद गर्न अस्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि यो कुरा याद गर्नु महत्त्वपूर्ण छ कि सम्पत्तीमा कुनै पनि उत्खनन गर्नु अघि माटोको परीक्षण धेरै महँगो हुन्छ, सामान्यतया केहि सयौं डलरको सट्टा हजारौं डलरमा चल्छ, र तपाईंले ती व्यक्तिगत खर्चहरू तिर्नु पर्दैन बरु तपाईंको व्यक्तिगत वित्तीय खर्चबाट बाहिर निकाल्नुहुनेछ। तिनीहरूलाई तपाईंको नयाँ घर निर्माणमा फैक्टर गरियो। नमिल्दो कुरा के छ भने यदि माटोलाई निर्माणको लागि अत्यन्त खराब ठानिन्छ भने, तपाईं सम्पत्ती प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न जुन तपाईं प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न।
नयाँ घरहरूको लागि माटो परीक्षण किन गर्ने?
नयाँ घरहरूको लागि माटो परीक्षण आवश्यक पर्दछ माटोको संरचना निर्धारण गर्नका लागि र यदि यसले राम्रोसँग फाउन्डेशनलाई समर्थन गर्न सक्दछ। यो सामान्यतया भवन अनुमति प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक अंश पनि हो। यदि माटो ढिलो, सजिलै संकुचित वा भावुक माटोले भरिएको पाए, अतिरिक्त आधार समर्थन आवश्यक छ
कसले माटो परीक्षण गर्छ?
माटो ईन्जिनियरहरूले माटो परीक्षण गर्छन्। तिनीहरू निजी रूपमा वा आर्किटेक्ट वा ठेकेदार मार्फत काममा लिन सकिन्छ जो तपाईंको नयाँ घरको योजना र निर्माण गर्दैछन्। यी व्यक्तिहरूलाई भू-टेक्निकल ईन्जिनियरहरूको रूपमा पनि चिनिन्छ, र तिनीहरूले माटो ईन्जिनियरको रूपमा काम गर्नु अघि धेरै मापदण्डहरू पूरा गरेको हुनुपर्छ। जियोटेक्निकल ईन्जिनियरहरूको सिभिल इन्जिनियरिमा डिग्री छ। उनीहरूको विशेष राज्यमा पनि इजाजत पत्र हुनुपर्दछ र ईन्जिनियरि र सर्वेक्षणका लागि राष्ट्रिय परीक्षार्थी परिषद इन्जिनियरि परीक्षाको आधारभुत पास गरे। सामान्यतया, स्नातक र इन्जीनियरिंग परीक्षाको बुनियादी पासिंग बीच, इञ्जिनियरले एक इजाजतपत्र प्राप्त माटो ईन्जिनियरको लागि काम गरेर अनुभव प्राप्त गर्दछ, जुन काममा प्रशिक्षण वा प्रशिक्षार्थीको एक प्रकारको रूपमा देख्न सकिन्छ।
माटो ईन्जिनियरको काम के हो?
माटो ईन्जिनियरहरूले माटोमा प्वालहरू खन्छन् र नमूनाहरू लिन्छन्। यी नमूनाहरू त्यसपछि माटोको उपयुक्तता निर्धारित गर्न परीक्षण गरिन्छ। मृदा इञ्जिनियरहरूले निर्माण प्रक्रिया अघि, निर्माण प्रक्रियाको क्रममा र निर्माण पूरा भएपछि चलिरहेको अनुकूलता सुनिश्चित गर्न माटोको परीक्षण गर्न सक्दछन्। उनीहरूले अवस्थित भवनहरू भएका साइटहरूमा माटो परीक्षण पनि गर्नेछन् जसले पूर्वाधार समस्याहरू अनुभव गर्दछ वा भविष्यमा समस्याहरू अनुभव गर्न सक्छ। एक पटक माटो ईन्जिनियरले परीक्षण र निरीक्षण गरेपछि र माटोमा भएका सबै यौगिकहरू नोट गरे, तिनीहरूले संरचनाबाट उत्पन्न हुन सक्ने कुनै पनि समस्याहरू खोज्छन्। त्यसो भए, तिनीहरूले यी मुद्दाहरूलाई पार गर्ने उत्तम तरिकाहरूमा सिफारिसहरू गर्छन्, जसमा माटोको ग्रेडि,अतिरिक्त निकास र जग र भूमि समर्थन समावेश हुन सक्छ। एक पटक माटो ईन्जिनियरले यी सबै कामहरू समाप्त गरेपछि, घर वा सम्पत्ती मालिक र निर्माण टोलीलाई नयाँ घर निर्माण गर्न आदेश गरिएको एक रिपोर्ट दिइन्छ। माटो ईन्जिनियरहरूले पनि जोड र बेसमेन्ट निर्माण गर्दा दृढ रूपमा चित्रण गर्दछन्।
माटो ईन्जिनियरहरू केका लागि जाँच गर्दैछन्?
माटो ईन्जिनियरहरूले माटोको संरचनाको परीक्षण गर्छन् कि यो निर्धारण गर्नका लागि कि यो बलियो माटो वा कमजोर माटो हो।कडा माटो माटो हो जुन विस्तार वा अधिक नमीको सम्बन्धमा संकुचित हुँदैन, र यसको राम्रो घनत्व छ, जसको मतलब यो निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि यो धेरै कम्प्याक्ट वा बसोबास गर्ने छैन।
कमजोर माटोले भवनहरूको लागि राम्रो समर्थन प्रदान गर्दैन। यस प्रकारको माटोको विस्तार वा १० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी आर्द्रताको कारण हुन सक्छ। यो ढीला र कटावको खतरामा पर्न सक्छ, वा यसले दबाबमा पर्ने बेला उल्लेखनीय रूपमा संकुचन गर्ने प्रवृत्ति देखाउँदछ।माटो इञ्जिनियरहरूले माटोमा विष र दूषित पदार्थहरूको पनि परीक्षण गर्दछ, जस्तै सिसा, आर्सेनिक, तामा, क्याडमियम, जिंक र बेरियम, जुन यसले क्षेत्र मानव स्वास्थ्यको लागि खतरनाक हो भनेर संकेत गर्न सक्छ। जबकि माटो कम्पेक्शन र सचन हटाउन सकिन्छ, विषाक्त माटो भएकोले तपाइँ जग्गा किन्न वा यसमा निर्माण गर्न चाहनुहुन्न भन्ने हुन सक्छ।
मैले आफ्नो माटोको परीक्षण कहिले गर्ने?
माटो परीक्षण सामान्यत: फाउन्डेशन खनेपछि गरिन्छ तर फुटन राख्नु अघि। यद्यपि तपाईले जमिन किन्नु अघि माटो परीक्षणको लागि पनि अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई लिखित रूपमा राख्नुपर्दछ कि तपाईको प्रस्ताव माटो परीक्षण पारित गर्ने सम्पत्तीमा आकस्मिक हो। माटो परीक्षण पनि निर्माण प्रक्रियाको क्रममाजारी हुन सक्छ।
यो याद गर्नु महत्त्वपूर्ण छ कि जमिन खन्नु अघि खरीद र पूर्व निर्माण चरणको अवधिमा माटो परीक्षणहरू भारी उपकरणहरूले पहिले नै जग खने पछि यो भन्दा महँगो हुन्छ।